गौरादहका हरेक काम चुस्त हुनेछ : प्रवक्ता भण्डारी - Jhapa Online
गौरादहका हरेक काम चुस्त हुनेछ : प्रवक्ता भण्डारी
नगेन्द्र भण्डारी गौरादह नगरपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । नेकपाका एक प्रभावशाली युवा नेताको रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आउनु भएका भण्डारी स्वतन्त्र र निर्भिक र तर्कपूर्ण विचार राख्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा समेत चिनिनु हुनुहुन्छ । संघीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल देखिनुभएका भण्डारी प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र समेत मानिनु हुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग झापा अनलाइनका सान नेपालले गर्नुभएको कुराकनी :
तपाईं जननिर्वाचित हुनुभएको १ वर्ष पूरा भयो । वडाबासीहरु लाई कत्तिको खुशी देख्नु भएको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष बितिसक्यो । एउटा बजेटको योजनामा पनि हामीले काम गरिसकेका छौँ । २० बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा अहिले जनताले जनप्रतिनिधि हुँदा धेरै कुरामा राहत महसुस गरेका छन् । आफ्ना व्यक्तिगत काम, सामाजिक काम, विकास निर्माणका काममा सिधै सम्पर्क राख्ने सकिने, भेटेर निर्धकताका साथ काम कुरा राख्न सकिने र सबै किसिमका काम उल्लेख्य मात्रामा भएको हुँदा जनतामा उत्साह र खुशी भएको महसुस गरेको छु ।
अध्यक्ष ज्यू, तपाईं नगर प्रबक्ता पनि हुनुहुन्छ । नगरबासीका धेरै गुनासा आए, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई छाडा छोडे भन्ने गुनासो बढेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमै नगरपालिका भित्रका केही अफिसियल काम र अन्य काम प्रती जनताको जनगुनासाहरु रहेका छन् । यो यथार्थ कुरा हो । जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका काम सहज, सरल र चुस्त दुरुस्त होस भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक कुरा हो । यसमा हाम्रा केही कमजोरी पक्षहरु छन् । हामीले समयमा नै यथेस्ट रूपमा नगरपालिका भवनको व्यवस्थापन नभएको हुँदा कामको व्यवस्थापन गर्न सकिएन,छोटो समयमा धेरै योजना सम्पन्न गर्नपर्ने, काम गर्ने कुरामा अनुभवको कमी, र प्रमुख रूपमा कर्मचारीको ठुलो अभावले समयमा जनताका काम हुन सकेनन् भने कतिपय विषयमा उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच समन्वयको अभाव, केही विधि र कानुनी प्रक्रियाले पनि समस्या रह्यो । कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधि मुताबिकनै छन्, निति र निर्देशन भित्र नै रहेर काम गरेका छन् । हामी यस आर्थिक बर्ष बाट यी सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।
गौरादह नगरपालिकामा १०/१२ करोड बजेट फ्रीज भयो भन्ने समाचारहरु बाहिर आए , यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो अनावश्यक हल्ला हो । नेपाल सरकार बाट आएको ससर्त रकम केही बढी आएको रकम फिर्ता भएको हो । जुन रकम यहाँ खर्च गर्न पाइन्न । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब बापत आएको बढी रकम फिर्ता भएको हो । नगरपालिका आफैं करिव १९ करोड घाटा बजेटमा थियो । अहिले पनि करिब १५ करोड दायित्व छ । अनि कसरी रकम फ्रीज हुन्छ रु वास्तविक र यथार्थ बुझेर मात्र मिडियाले लेखिदिन आग्रह गर्दछु ।
नगर गुरुयोजना कहिले तैयार हुन्छ ?
नगरका महत्त्वपूर्ण २२ वटा भन्दा बढी योजनाहरुको डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरी विभिन्न कन्सेल्टेन्सीहरु लाई दिई सकिएको छ । केही योजनाको रिपोर्ट आइसक्यो । अब ३ महिना भित्रमा सबै प्रतिवेदन आइसक्ने छन् । त्यसपछि सार्वजनिक गर्नेछौं ।
गत हप्ता संघीय मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भ्रमण सम्पन्न गर्नु भएछ, समग्रमा भ्रमण कस्तो रह्यो ?
गत हप्ता हामी संघीय सरकार संग केही योजनाहरु लिएर गएका थियौं । प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रालयमा पनि योजना पश गरेका छौँ । विशेष गरि प्रधानमन्त्रीले केहि योजनालाई विषेश चासो लिनु भएको छ । जसमा गौरादह १ अर्जुनदेव राइको घर देखि गौरादह बजार हुँदै ठेकिटोला सम्मको सडक, गौरादह १ सितापुरी देखि स्वामी चोक हुँदै खजुरगाछी सम्म, गौरादह ३ गुराँसचोक देखि चप्रामारी बजार सम्मको सडक, साविक महारानी झोडाको नक्सा धनीपुर्जा, साविक महारानी झोडाको नमुना खेती, गौरादहको पोखरी जस्ता योजनाहरुको बिस्तृत परियोजना लगायत डिपिआर लिएर आउनुहोस् , योजनामा समाबेश गरिदिने छु ( प्रम ले आश्वासन दिनुभएको छ । साथै पाडाजुगी(गौरिगन्ज सडकलाई चार लाइनको सडकको रूपमा बिकास गराउन माग गरेका छौँ ।
निर्वाचित भए देखिनै निकै व्यस्त देखिनु हुन्छ । व्यस्तता संगै के(कस्ता बाधा अड्चनहरु भोग्दै हुनुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा निर्वाचित भएपछि वार्ड तथा नगरपालिकाका थप जिम्मेवारी र व्यक्तिगत कामले अलि बढी व्यस्त भइएको छ । भौतिक पुर्वाधार पक्ष र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै पारदर्शी ढंगले काम गर्दै आएका छौं । राम्रा कामहरु उल्लेख्य छन् । तर कामका प्रचार कम हुने, अनावश्यक बिना आधारका विषयमा अनावश्यक हल्ला गर्ने, वार्डको भुगोल ठूलो भएकोले बिकासको बजेट कम हुने हुँदा सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन । वार्डवासीहरु बाट उत्साहजनक साथ र सहयोग पाएका छौ । स(साना देखि ठुला समस्या र विकास निर्माणमा वार्ड अध्यक्षलाई खोज्ने र कार्यालयमा पनि बस्नुपर्ने हुँदा समयको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ ।
तपाईंको वडामा सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण बिकास योजनाहरु के–कस्ता छन् ?
सडक उच्च स्तरीय ग्राभेल ६ किमी, सडक ग्राभेल २.५ किमी, ३ वटा कल्भर्ट निर्माण, लाल जनकल्याण बिधालयमा शौचालय, मोति मा वी मा रंगिन कर्कटपाता, ४ वटा मोठ–मन्दिरलाइ सहयोग, २३ वटा ह्युम पाइप जडान, २३ वटा बिजुलि पोल खरिद, ड्रेन ४५० मिटर, गौरादह बजार निर्माण, २३२ घरलाई सुलभ सौचालय बितरण, घर नं। तथा वार्ड प्रोफाइल निर्माण, ८४ जनालाइ सीप विकास तालिम, ३०० जना वालवालिका लाई दन्त शिविर तथा मन्जन ब्रश बितरण,नमूना सरसफाइ टोलको काम थालनी, बिधालय तथा विद्यार्थीहरुलाइ सेफ्टी प्याड, फिनेल ब्रश, कार्पेट, १८ थान फेन, डिजे साउन्ड बितरण, ३०० मिटर खाने पानी पाइप बितरण, सर्वदलिय र संचारकर्मीलाइ भएका कामको अनुगमन गराइएको, सार्वजनिक सुनुवाइ गराइएको छ ।
अन्त्यमा झापा अनलाइन मार्फत नगरबासीलाइ के भन्न चाहनु हुन्छ ?
लोकप्रिय अनलाइन झापा अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण नगरवासीलाइ के आग्रह गर्न चाहन्छु भनें पौष २० र २१ गते सम्पन्न नगरसभा पछि हामी माघ महिना देखि असारभरी ६ महिनाको अवधिमा गौनपाको सिमित साधन र श्रोत र दुइजना मात्र प्राबिधिक, सिमित कर्मचारी, हाम्रो पनि पहिलो बर्षको कामको अनुभव, नगरका ५०० भन्दा बढी योजनाको सम्पुर्ण काम गर्न अत्यन्त कठिनाइ भएको थियो । वडास्तरिय र भौतिक पुर्वाधारको तर्फ साना ठुला योजना उल्लेख्य रूपमा भएका विकासका आधारभुत कुराहरू तैयार भएका छन् । नगर भित्रका योजना र प्राबिधिक पक्ष सिमित भएको कारण केही समस्या बेहोर्नु पर्यो, जसको कारण नगरवासीले पनि निकै दुख पाउनुपर्यो । अहिले नगरपालिकामा कर्मचारी आउने क्रम जारी छ । अब हरेक काम व्यवस्थित हुनेछन् । नपा का हरेक कामहरु चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी साथै सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौं र मिडियाका साथीलाई पनि नगरपालिकाका समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्य तथ्य र सम्वन्धित पक्ष संग यथार्थ कुरा बुझी समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु ।